Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad Heersare ah oo ka dhacday Magalada London
Xaflad Heersare ah oo ka dhacday Magalada London
Posted by ONA Admin	/ June 17, 2012
Habeenki Ogadeniya oo Guul kusoo dhamaatay.
Waxaa kulan weyn oo fantasiyouu ka dhacay xalayto magaalada London ee cariga UK oo lagusoo bandhigay Hiddaha Iyo Dhaqanka Somalida Ogadeniya. Xafladan oo aheyd Habeenka Ogadeniya ayaa waxaa kasoo qeyb galay shacab aad u tiro badan oo shacabka Somalida Ogadeniya iyo jaaliyada Somaliweyn ee magaalada London.
Ururka OYSU London iyo fanaaniin ay kamid ahaayeen Jaango, Cabdi Khaliq, Maxamed Yusuf iyo Haawa Luul ayaa habeenka Ogadeniya ka dhigay wacdaro. iyaga oo madadaalo, heeso halgan, Heeso Jaceyl, Dhaanto, Guubaabo sugaaneed iyo farsamoyin casri ah goobta la yimid. Ururka dhalinta Ogadeniya ee London ayaa iyagu waxay caan ku yihiin aqoonsi gooni ahna u leeyihiin Barnaamij kasta oo ay sameyaan in faro gooni ah oo lagu aqoonsado leyihiin islamarkaasna ay ku guulaystaan barnaamijyadooda.
Xafladan ayaa aheyd dhowr qeybood waxaana qeybti kowaad ahaa furitaan, halkaas oo Gudoonka Jaaliyada London Halgame Xasme Shariif uu furay shirka kuna soo dhaweeyay dhalinta dadaalka xooga badan ee ay ugu jiraan sidii umadooda ay dulliga uga saari lahaayen.
Furitaan kadib waxaa cod baahiyaha qabsaday oo si aad iyo aad ah loogusoo dhaweeyay Masuuliyiinta Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya waxaana madasha fariin iyo warbixinba kasoo jeediyay Maxamed Cabdi Yasiin Diirane oo ah Hoggaanka abaabulka iyo Arrimaha Bulshada.
Gudomiyaha waxa uu ka hadlay ahmiyada midowga ummadu leedahay, iyo micnha habeenka Ogadeniya. Waxa uu hanbalo u soo jediayay jaaliyada Ingiriiska si gaar ahaaneyd ururka OYSU oo madasha daadihinayay.
Intaas kadib waxaa la daawaday Filim ka hadlaya dhaqdhaqaaqa ay dhalintu ka wado caalamka. Filimkan oo ahaa mid fariimo xanbaarsan waxa uu dhiiri galinayay islamarkaasna soo jiidanayay dhalinyarada Somalida Ogadeniya sidii halgankooda ay u xoojin lahayeen. filimkan oo warbixin ka bixiyay Xoghayaha Guud ee OYSU mudane Mjahid.
Intaas kadib waxaa la soo bandhigay oo la guda galay, Ruwaayado, Majaajuloyin xiiso wata, Heeso halgameed iyo suugaan kale oo xoog badan.
Barnaamijka Ilays oo goob joog ahaa ayaa idiinkasoo diyaariyay filimaan iyo wareysiyo aad u xiiso badan.
Sawiraanta barnaamijkan iyo Filimaanba dib kala soco